> Resource > Ladnaansho > Rocstor Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Rocstor Hard Drive
Waxaan ka Rocstor Hard Drive soo kaban karto, Files?
Waxaan leeyahay drive ah Rocstor qaadi karo adag kaas oo lagu isticmaalo muddo dheer. Waxaan ku kaydsan sawiro iyo filimo badan oo ku yaal. Shalay waxaan si qalad ah u formatted. Oo anna aan haysan nuqul ka mid ah files waxa on. Weli waa suurtagal ii tahay inaan dib ugu heli files ii?
Tirtirka ah Shil iyo formatting jira laba sababaha ugu waaweyn ee drive adag khasaaro xogta. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaad haysataa siyaabaha ay u soo ceshano xogta lumay ka drive Rocstor adag. Files lumay lagu calaamadeeyay kaliya xogta iyo Reebnaan yaa ku wadid aad u adag. Sida inta files lumay aan la overwritten by files cusub, fursadaha dib u helo waa weyn.
Taas macnaheedu waxa weeye in aad u baahan tahay si ay u joojiso isticmaalka wadid aad u adag oo si dhakhso ah u hesho barnaamij soo kabashada xogta Rocstor haddii aad rabto in ay dib u hanato xogta lumay. Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa codsi sax ah in aad u baahan tahay. Barnaamijka Tani waxay u suura in aad ka bogsato xogta ka Rocstor drive adag wax yar uun qasabno fudud gudahood. Haddii files aad drive Rocstor adag ayaa laga badiyay sababta oo ah tirtirka, formatting, musuqmaasuqa file, Baadi nidaamka ama xataa weerar virus, inaad isla markiiba qaadan kartaa qalab sida daawo. Waxa ugu weyn cajiib ah barnaamijkan waa in ay soo kabanayso ku dhowaad dhammaan noocyada files ka drive Rocstor adag, oo ay ku jiraan image, video, file maqal ah, file document, iwm
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad barnaamijka Wondershare Rocstor kabashada xog ah in ay dib u soo ceshano xogta aad lumay hadda! Iyadoo version maxkamadda, waxaad iskaan kartaa Rocstor drive adag iyo magacyada Falanqeynta helin files si loo hubiyo in xogta aad badiyay la kama uusan soo kabsan karaan ama.
Qabtaan Rocstor Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Halkan waxaan ka shaqayn doonaa dib u soo kabashada la Windows version of Wondershare Data Recovery. Users Mac aad sidoo kale raaci kartaa howlgalka la mid ah la version Mac.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si loo soo celiyo xogta ka Rocstor drive adag
Ka dib markii ay ku rakibidda ad socda barnaamijka on your computer Windows, waxaad u baahan tahay in ay doortaan hab soo kabasho hore.
Si aad u soo kabsado lumay, la tirtiro ama faylasha formatted ka drive Rocstor adag, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" sida isku day ah oo hore.
Fiiro gaar ah: Haddii aad doonaysid in aad ka soo kabsado xogta ka Rocstor drive dibadda adag, fadlan hubi in uu noqon karaa mid si fiican u xiran your computer sameeyo.
Tallaabada 2 baarista drive Rocstor adag tahay in la raadiyo files lumay
Halkan waxa aad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan aad drive Rocstor adag oo guji "bilow" button waxaan suuqa kala ah in aynu barnaamijka waxa laga baarayo.
"Enable Deep Scan" waa fursad si aad u soo kabsado xogta ka formatted Rocstor drive adag.
Tallaabada 3 Ladnaansho files ka Rocstor drive adag
Ka dib markii iskaanka, dhammaan faylasha helay on your drive Rocstor adag lagu soo bandhigi doonaa in uu furmo. Waxaad u baahan tahay oo kaliya si ay u xusaan faylasha aad rabto in ay dib u hanato oo guji "Ladnaansho" in ay dib u badbaadin si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo files si degdeg ah ka dib markii uu dib u soo kabashada dib si aad u drive Rocstor adag.